Accueil > Gazetin'ny nosy > Raharaha Houcine Arfa: Mpitsara iray nampidirina am-ponja vonjy maika
Raharaha Houcine Arfa: Mpitsara iray nampidirina am-ponja vonjy maika
Mivoatra ny raharaha Houcine Arfa izay somary nangingina tato ho ato. Fantatra ankehitriny fa nampidirina am-ponja vonjy maika any amin’ny fonjan’Ambatolampy, tamin’ny alakamisy hariva lasa teo, ny mpitsara mpanao famotorana iray antsoina hoe Haingo Ramiandrisoa. Ity farany no mpitsara nandray an-tanana ny raharahan’i Houcine Arfa ary voarohirohy ho nandray anjara tamin’ny fampandosirana ity teratany frantsay ity. Ny talen’ny BCCJEP (Bureau de Contrôle des Juridictions et Etablissement Pénitentiaire) sy ny talen’ny DPI (Direction de la Promotion de l’Intégrité) no nitondra fanazavana momba izay, nandritra ny valan-dresaka nataon’izy ireo ho an’ny mpanao gazety omaly, teny Faravohitra. Marihana fa ankoatra ity mpitsara mpanao famotorana ity dia olona 5 hafa ihany koa no efa voasambotra ary nampidirina am-ponja vonjy maika. Tsy iza moa ireto olona 5 ireto fa ireo mpiandry fonja miisa 3 izay efa nalefa eny Antanimora, tany amin’ny fiandohan’ny volana janoary lasa teo, ary ny dokotera iray sy mpitsabo mpanampy iray nanara-maso an’i Houcine Arfa tamin’ity farany voatazona tao amin’ny fonjan’i Tsiafahy. Marihana fa anisan’ireo olona noampangain’i Houcine Arfa ho nandray vola taminy, tao anatin’ilay ampamoaka nataony tamin’ny mpanao gazety frantsay, io mpitsara mpanao famotorana nampidirina am-ponja vonjy maika any Ambatolampy io. Raha ny fanazavana nomen’ireto tale tompon’andraikitra ambony eo anivon’ny ministeran’ny Fitsarana ireto, vao nanomboka ity raharaha ity dia efa nanokatra fanadihadiana ny BCCJEP, hamantarana ny zava-niseho marina tamin’ny fotoana nandosiran’i Houcine Arfa. Efa niatrika famotorana eo anivon’ny fitsarana ambaratonga voalohany ao Ambatolampy moa ny mpitsara Haingo Ramiandrisoa, nanomboka omaly. Etsy ankilany, efa nalefa any amin’ny Birao mahaleo tena miady amin’ny kolikoly ihany koa ny atontan-taratasy momba azy ka afaka fotoana fohy dia hiroso amin’ny fanadihadiana ny Bianco. Tsy mifarana hatreo fa mbola hitohy ny raharaha Houcine Arfa ary betsaka amin’ireo mpanara-baovao no miandry izay mety ho fiafarany.
Fitsarana tampony: Noesorina i Ranary Robertson, ho soloina an’i Charles Andriamiseza
Ny talata lasa teo no noesorina tamin’ny toerany, nandritra ny filan-kevitra ny minisitra, ny lehiben’ny fampanoavana eo anivon’ny fitsarana tampony (PGCS), Ranary Robertson Rakotonavalona. Fanapahan-kevitra izay niteraka resabe teo amin’ny tontolon’ny fitsarana noho ny tsy fanajana ny rijan-dalàna izay mamaritra ny fomba fanesorana ny lehiben’ny fampanoavana eo anivon’ny fitsarana tampony. Tsiahivina fa nitsangana nanohitra izany fanapahan-kevitra noraisin’ny filankevitra ny minisitra izany ny sendikan’ny mpitsara eto Madagasikara (SMM) noho izay tsy fanarahan-dalàna izay. Betsaka moa ny resaka nandeha tao aorian’ny nanesorana an’ingahy Ranary Robertson Rakotonavalona, anisan’izany ohatra ny filazana fa ny antony nanesoran’ny fitondrana HVM azy dia noho ity farany tsy azon’izy ireo baikoina. Raha ny loharanom-baovao marim-pototra anefa dia fantatra ankehitriny fa noesorina tamin’ny toerany i Ranary Robertson Rakotonavalona ary ho soloina ny minisitry ny Fitsarana teo aloha, Charles Andriamiseza. Ity farany izay mitàna ny toeran’ny filohan’ny sampana fandravana na ny “cours de cassation” eo anivon’ny fitsarana tampony, amin’izao fotoana izao. Mazava ho azy fa misy tombony ho an’ny mpitondra ankehitriny ny fametrahana olona azony baikoina eo amin’ny toeran’ny PGCS. Ohatra azo raisina, ny fitsarana tampony no anisan’ireo rafitra hanangana ilay sampana manokana izay hanara-maso ny vola ho ampiasain’ireo kandida amin’ny fifidianana.